Akwụkwọ ndị Roman Sulla dere na Martech Zone
Edemede site na Roman Sulla
Roman banyere ụwa nke data dijitalụ na 2013. O jisiri ikere òkè n'ọtụtụ ntụziaka: onye mmepe n'ihu, njedebe ihu, mmepe mmepe, onye nwe ngwaahịa, na Isi nke Ngwaahịa. Ka o siri dị, o sonyere n'ịzụlite clicker tracker; CRM-ngwaọrụ maka ụlọ ọrụ; ngwaọrụ iji hazie ma nyochaa usoro ịzụta mgbasa ozi; yana ọrụ ọhaneze iji jikọọ ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa yana iji hụ na mmekọrịta dị mma n’etiti ha. Kemgbe afọ 2019 ka ọ na-arụ ọrụ JustControl.it